Wasiirka Caafimaadka ee cusub oo Xilka la wareegay (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Wasiirka Caafimaadka ee cusub oo Xilka la wareegay (Daawo Sawirada)
Xaflad xilwareejin ah oo maanta ka dhacday xafiiska R/wasaaraha Xukuumada Federaalka soomaaliya ayaa waxaa xilka la wareegay wasiirka cusub ee Wasaarada caafimadka Mudane Maxamed Xaaji C/nuur.
Xafladka xilwareejinta ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka wasaarada Cadaalada ahna ku Simaha R/wasaaraha iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta wasaarada caafimadka.
Wasiirka Cadaaladda ahna kusimaha R/wasaaraha Mudane C/laahi Axmed Jaamac Ilka jiir oo kulanka xilwareejinta ka hadlay, ayaa bogaadiyay howshii Qaranka Soomaaliyeed ay u soo qabatay Marwo Xaawa Xasan Maxamed, isagoo sidoo kalana Wasiirka Cusub ee Xilka la wareegay kula dar-daarmay wasiirka cusub ee xilka la wareegay in uu guto shaqadiisa si ay ku jirto daacadnimo iyo hufnaan,waxaana jiri doonta isla xisaabtan dhab ah sidaas waxaa yiri Mudane ilka jiir.
Ugu danbeyntii mudane ilka jiir waxuu u mahad celiyay wasiirkii hore ee Caafimadka Marwo Xaawo Xasan Maxamed asigoo ku amaanay waqtigii ay shaqada haysay in ay ka soo dhalaashay waajibadkii saarnaa,waxa uuna ka codsaday Marwo Xaawo in ay la shaqeyso wasaarada caafimadka.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa Did ugu soo celiyey Haweenay Gurigeed xoog looga heestay
Kenya oo bilowday dib u celinta Qaxootiga Soomaaliyeed